मेटालिका - विकिपिडिया
मेटलिका एक अमेरिकी भारी धातु ब्यान्ड हो। यो ब्याण्ड १ 198 1१ मा लस एन्जलसमा स्वर / गिटार वादक जेम्स हेटफील्ड र ड्रमर लार्स अलरिकले गठन गरेको हो, र धेरै जसो करियरको लागि सान फ्रान्सिस्कोमा रहेको छ।   ब्यान्डको द्रुत टेम्पो, इन्स्ट्रुमेन्टहरू र आक्रामक सian्गीतकारिताले उनीहरूलाई मेगाडेथ, एन्थ्रेक्स र स्लेयरको साथमा, थरास धातुको संस्थापक "बिग चार" ब्यान्डहरू मध्ये एक बनायो। मेटलिकाको वर्तमान लाइनअपमा संस्थापक सदस्यहरू र प्राथमिक गीतकारहरू हेटफिल्ड र उल्रिच, लामो समयदेखि नेतृत्व गर्ने गिटारिस्ट किर्क ह्यामेट र बासिस्ट रोबर्ट ट्रुजिलो शामिल छन्। गिटारिस्ट डेभ मुस्तान (जसले ब्यान्डबाट निकालिएपछि मेगाडेथ गठन गरेका थिए) र बासिस्ट रोन म्याकगोभनी, क्लिफ बर््टन (जसको १ 198 66 मा स्वीडेनमा भएको एउटा बस दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो) र जेसन न्यूटेड ब्यान्डका पूर्व सदस्य हुन्।
मेटालिका २००८ लण्डनमा।From left to right: Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield and Robert Trujillo.
३ समूह सदस्य
१ 198 1१ को उत्तरार्धमा लस एन्जलसमा मेटलिका गठन भएको थियो जब डेनमार्क ड्रमर लार्स अलरिकले लस एन्जलसको अखबार द रीसाइक्लरमा एउटा विज्ञापन राखेका थिए जसमा यस्तो लेखिएको थियो, "ड्रमर अन्य मेटल संगीतकारहरू टायगरको पान टाang्ग, डायमंड हेड र आइरन मेडेनसँग जाम गर्न खोज्दै थिए। " गितारवादक जेम्स हेटफील्ड र लेदर आकर्षणका ह्यू ट्यानरले विज्ञापनको जवाफ दिए। यद्यपि उनले ब्यान्ड बनाएको थिएन, उल्रिचले मेटल ब्लेड रेकर्डका संस्थापक ब्रायन स्लागललाई सोधे कि यदि उनले लेबलको आगामी संकलन एल्बम मेटल मास्याक्र्याका लागि गीत रेकर्ड गर्न सक्दछन् भने। स्लेजलले स्वीकार गर्‍यो, र अलरिकले हेटफिल्डलाई गाउन र ताल गितार बजाउन भर्ती गरे।  बैन्ड आधिकारिक रूपमा अक्टुबर २ 28, १ 198 1१ मा गठन भएको थियो, अल्रिक र हेटफिल्ड पहिलो पटक भेट भएको पाँच महिना पछि।  
ब्यान्डको नाम उल्रिचको साथी रोन क्विन्टानाबाट आएको थियो, जो एक फ्यानजाइनका लागि ब्रेस्टस्टोरिम गर्दै थिए र मेटलमेनिया वा मेटलिका विचार गर्दै थिए। दुबै नाम सुने पछि, उल्रिकले आफ्नो ब्यान्डका लागि मेटलिका चाहाए, त्यसैले उनले क्विन्टानालाई यसको सट्टा मेटलमानिया प्रयोग गर्ने सल्लाह दिए। ] डेभ मोस्टेन लेड गितारिस्टको लागि एक विज्ञापनमा जवाफ दिए; उल्रिक र हेटफिल्डले उनलाई महँगो गितार उपकरण देखे पछि भर्ती गरे। १22२ को शुरुमा, मेटलिकाले यसको पहिलो मौलिक गीत "हिट द लाइट्स" रेकर्ड गरे, मेटल नरसंहार I संकलनको लागि। हेटफिल्डले बास, ताल गितार बजाउँथे र गाए जबकि लोयड ग्रान्टलाई गिटार एकलको रूपमा श्रेय दिइयो र लार्स अलरिकले ड्रम बजाए।  मेटल नरसंहार १ जून १,, १ 198 ;२ मा जारी भयो; प्रारम्भिक प्रेसिंगले ब्यान्डलाई "Mettallica" को रूपमा गलत सूचिकरण गर्‍यो, ब्यान्डलाई रिस उठाउँदै। ] गीतले शब्दको उत्पत्ति गर्‍यो र ब्यान्डले मार्च १,, १ 198 2२ मा अनाहिम, क्यालिफोर्नियाको रेडियो सिटीमा भर्खरै भर्ती गरिएको बासिस्ट रोन म्याकगोभनीसँग पहिलो प्रत्यक्ष प्रदर्शन बजायो। ] तिनीहरूको पहिलो प्रत्यक्ष सफलता चाँडै आयो; तिनीहरू १ 198 2२ को अमेरिकी यात्राको एक gig मा बेलायती हेवी मेटल ब्यान्ड सक्सनको लागि खोल्न छानिएका थिए। यो मेटलिकाको दोस्रो गिग थियो। मेटलिकाले यसको पहिलो प्रदर्शन पावर मेटलमा रेकर्ड गर्‍यो, जसको नाम १ 198 2२ को शुरुमा क्विन्टानाको प्रारम्भिक व्यवसाय कार्डबाट प्रेरित गरिएको थियो।
"थ्रेश मेटल" भन्ने शव्द फेब्रुअरी १ ​​1984 rangrang मा केरंगले निर्माण गरेका थिए! एन्थ्रेक्सको गीत "मेटल थ्रेसिsh पागल" सन्दर्भमा पत्रकार मल्कम डोम। ] यो भन्दा पहिले, हेटफिल्डले मेटलिकाको ध्वनिलाई "पावर मेटल" को रूपमा दर्शायो। १ 198 2२ को अन्ततिर, उल्रिक र हेटफिल्डले पश्चिमी हलिवुड नाइटक्लब व्हिस्की ए गो गोमा एक कार्यक्रममा भाग लिए, जसमा ब्यान्डिस्ट क्लिफ बर्टनले ब्यान्ड ट्रामामा चित्रण गरे। ती दुई बुर्टनले वाह वाह वाह प्याडलको प्रयोगबाट "उडाए" र उनलाई मेटेलिकामा सामेल हुन आग्रह गरे। हेटफिल्ड र मुस्टेन म्याकोभ्नलाई छोड्न चाहन्थे किनकि उनीहरूले सोचे "उनले केही योगदान गरेनन्, उनी भर्खर पछ्याए"। ] यद्यपि बर्टनले सुरुमा प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि बर्षको अन्त्यसम्म उनले स्यान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्रको एल सेरिटोमा सर्ने ब्यान्ड सर्तमा स्वीकार गरे। ] बर्टनसँग मेटलिकाको पहिलो प्रत्यक्ष प्रदर्शन मार्च १ 198 33 मा नाइटक्लब द स्टोनमा थियो र बर््टनलाई पहिलो पटक रेकर्ड गर्ने मेगाफोर्स डेमो थियो (१ 198 33)। ]
मे १ 198 33 मा, मेटेलिकाले आफ्नो पहिलो एल्बम, मेटल अप योर गधा रेकर्ड गर्न न्यू योर्कको रोचेस्टर यात्रा गरे, जुन पॉल कर्कियोले उत्पादन गरेका थिए। ] अन्य सदस्यहरूले उनको ड्रग र मदिरा सेवनको दुरुपयोग, र अप्रिल ११, १ 198 33 को रेकर्डि session सत्रको ठीक अगाडि हिंसात्मक व्यवहारको कारण मुष्टेनलाई ब्यान्डबाट बेदखल गर्ने निर्णय गरे।  प्रस्थान गितार वादक किर्क ह्यामेटले त्यही दिउँसो मस्टेनलाई हटाए। ] मेमोलिकाको पहिलो प्रत्यक्ष प्रदर्शन अप्रिल १ 16, १ 1983on मा डोवर, न्यु जर्सीको द नाइटक्लबमा द प्लेप्लेस भनिन्थ्यो; ] समर्थन ऐन एन्थ्रेक्सको मौलिक लाइन-अप थियो, जसमा डान लिलकर र नील टर्बिन पनि थिए।  यो पहिलो पटक हो जब दुई ब्यान्डहरूले सँगै प्रत्यक्ष प्रदर्शन गरे। ]
मेटालिका discography at Discogs
विकिमिडिया कमन्समा मेटालिका सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=मेटालिका&oldid=1016372" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन १० जुन २०२१, १८:२३
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १८:२३, १० जुन २०२१ मा परिवर्तन गरिएको थियो।